Tonga maro ny olona manao vaksiny
Mitohy hatrany ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny covid 19 eto Toamasina amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 50 isan'andro ireo olona tonga eny amin'ny toerana fanaovana vaksiny. Manao ora mitohy moa ireo mpitsabo manap izany ka manomboka amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 3 ora folakandro, natao izao fandaminanan izao hanamorana ny fandefasana tatitra ara-potoana any amin'ny tompon'andraikitra isan'andro arakin'ny nambaran'i Dr Liliane Zafindraporaka tompon'andraikitry ny serasera.
Nampafantariny ihany koa fa niara-nanomboka tamin'ny alatsinainy 17 may ny taty region atsinanana dia teto Toamasina voalohany hatrany Marolambo. Nohamafiny ihany koa moa fa maimaim-poana ny fanaovana vaksiny "AstraZeneca" hiarovana amin'ny valan'aretina covid 19.
Mbola maro no tsy mahafantatra hoe inona moa ilay vaksiny "Covichield" ary inona ny vaksiny "AstraZeneca", ka nitondrasan' fanazavana izany i Dr Norovoahangy Ramialisoa fa mitovy ihany izy roa ireo fa ny oterana sy ny orin'asa mpamokatra azy ireo no samy hafa.
(208) S.Lantomalala : 20-05-2021 - 08:30